Kedu uru nke igwe eletrik? 5 uru! | Kedu uru nke igwe eletrik? 5 uru!
Mbido blog Ngosi igwe eletrik Kedu uru nke igwe eletrik? 5 uru!
Datebọchị ： 2021-07-26 Categories ：Ngosi igwe eletrik Nlele ： 1,935
1 Na-agagharị n'enweghị nsogbu
Dị ka ọ dị na igwe, enwere ike ịtụle ikike ịga ebe dị iche iche dị ka uru dị ukwuu nke igwe eletrik. Ndị mmadụ na-agba ịnyịnya, igwe eletriki igwe anaghị akwụ ụgwọ ịbịa na-aga, na-agbanwe ma na-adaba adaba.
Igwe eletrik dị obere, ọkụ ma nwee ike ịmegharị ya n'okporo ámá. Karịsịa na obodo ndị ahụ ebe anụ ọhịa ọ bụla bụ ọla edo, a pụrụ itinye igwe eletrik eletrik na ala nke ala ma ọ bụ ebe a họpụtara nke obodo, na-ebuteghị ohere na ohere ọha.
2 、 Akụ na ụba
Nwanyị Ma na mbụ na-anya ụgbọ ala ụbọchị ọ bụla, mana ugbu a, ọ zụtala igwe eletriki igwe ọhụrụ, nke na -adịghị adaba maka ịla ma ị lọta ọrụ, mana enwekwara ọtụtụ ego gas. Maazị Wang zụkwara ịnyịnya ígwè eletrik maka nwa ya nke nọ na kọleji. Maazị Wang kwuru, "Nwatakịrị ahụ nwere ogologo oge ọ ga-aga ụlọ akwụkwọ, ọ na-adịkwa ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala ịnya igwe eletrik."
N’ezie, ịnyịnya ígwè eletrik na ígwè ndị na-enweghị ego akwụ bụ otu ihe ahụ, na ụgbọ ala eletrik nkịtị adịghị ọnụ. N'otu oge, ọnụ ahịa ọkụ eletrik bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ iri nke ego mmanụ ụgbọ ala. Ndi mmadu achoghi onu ego na onu ahia?
na-aga n'okporo igwe eletrik igwe A6-R 16.5KG
3, Energy ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe
Igwe igwe eletrik nwere uru ọzọ: ọ nwere ike nweta ikuku anwuru ma anaghị emetọ ikuku. Maka otu njem ahụ dị otu narị kilomita, ụgbọ ala na-achọkarị mmanụ mmanụ 100-5 lita na ọgba tum tum dị mkpa 15-2 lita mmanụ, mana igwe eletrik chọrọ naanị ogo 6-1 nke ọkụ. Site na nsogbu ọgba aghara ụwa na-eto eto, igwe eletriki eletrik bụ nhọrọ dị mma.
N’ụwa taa a na-emetọ emetọ, anyị na-atụnye ụtụ na nchedo gburugburu ebe obibi site na iji igwe eletrik ugboro ugboro.
4, adaba odori
Igwe igwe eletrik, n'ozuzu ya nwere ike ịgba ọsọ 40 kilomita kwa ụbọchị, ebe ị na-akwụ ụgwọ dịkwa oke mma: mgbe ị na-eji ya n'ụbọchị, were batrị igwe eletrik n'ụlọ n'abalị wee kwụba ya. Nnọọ adaba. Ọ bụrụ na igwe eletrik na-agwụ ike, ịnwekwara ike ịdabere n'ike mmadụ ma laghachi azụ. Nke a dị mfe karịa ụgbọ ala na-enweghị gas.
5, ịnyịnya nchekwa
Dika igwe igwe eletrik di nfe ma di nwayọ (enwere ike idozi oso ososo ma nwekwaa oke aka), ma n’otu oge ya na ihe ndi choro choro, oru nchedo nke ugboala ugbo ala elekere di nma, karisie nkpuchi (diski abuo breeki) na akụkụ ndị ọzọ nke egosipụtara ka emeela ka ọ dị mma iji gboo mkpa nchekwa nke njem ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị.
Igwe igwe eletrik, ọsọ ọsọ ụgbọ ala eletrik agaghị adị oke oke. Ya mere na-agba ịnyịnya, nnọọ mma. Karịsịa maka ndị nne nwere ụmụ ọhụrụ, uru a bara uru ma dịkwa nchebe.
Tags:igwe electric uru
Mbụ: Kedu ihe bụ ịgba bọọlụ na Tokyo Olympic Games?
Next: Onye bu uzo nke igwe eletriki igwe eletriki
Naanị 15.7KG igwe eletrik maka ire ere A6-R